Naya Drishti | जनयु'द्धको रफ्तार सँगै हाम्रो प्रेमको रफ्तार पनि बढ्दै गयो - Naya Drishti जनयु'द्धको रफ्तार सँगै हाम्रो प्रेमको रफ्तार पनि बढ्दै गयो - Naya Drishti
जनयु’द्धको रफ्तार सँगै हाम्रो प्रेमको रफ्तार पनि बढ्दै गयो
मंसिर १५, सल्यान । प्रिय पाठकबृन्द, २०५२ सालदेखि देशमा जनयु,द्ध आरम्भ भयो। नेपाली समाजको सम्पुर्ण उथलपुथलमा यो ऐतिहासिक परिघटना थियो । यसले बिचार, राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा समेत छुट्टै बहसको सिर्जना गरेको यहाँहरूलाई थाहा नै छ ।
अहिले मंसिर महिना छ । नेपाली संस्कृति र परम्परा अनुसार यो महिनालाई बिबाहको महिना पनि भनिन्छ तर आज हामी मंसिर महिना बिशेशका कुरा गर्दै छैनौं । हामी कुरा गर्दैछौं – परम्परागत बिबाह भन्दा भिन्न मार्क्सवादी, जनबादी बिबाहको ।
यसै सन्दर्भमा आज हामीले देशमा १० बर्ष संचालित जनयु,द्धमा जनबादी बिबाह कसरी हुन्थे ? बिबाहले क्रान्ति, राजनीति र जिवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? लगएत बिषयमा तत्कालीन जनयु,द्धमा जनबादी बिबाह गरेका मध्ये पुर्व अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा नेकपाका युवा विद्यार्थी नेता तिलकराज भण्डारी सँग कुराकानी गरेका छौं ।
प्रस्तुत छ – जनबादी प्रेम र बिबाह बारे भण्डारी सँग गरिएको रमाइलो कुराकानीमा आधारित पुर्ण पाठ ।
हामी ( तिकल राज भण्डारी र माेति बस्नेत ) ले जनवादी विबाह २०६४ पुस ३ मा गरेका हौं । विबाह गर्दा म २४ वर्ष र उनी २१ वर्षकाे थिइन । त्यतिबेला महान जनयु,द्धकाे जगमा सञ्चालित संयुक्त जनआन्दाे’लनकाे सफलता लगत्तै शान्ति प्रक्रिया चलिरहेकाे थियाे ।
राजनीतिक र सामाजिक हिसावले माअाेवादीहरुप्रति जनताकाे निकै आकर्षण थियाे । जनवादी संस्कृती र विवाहप्रति मान्छेहरुकाे निकै चासाे थियाे । सल्यान सदरमुकाम तथा श्रीनगर क्षेत्रमा हाम्राे जनवादी विवाह नै पहिलाे भएकाे थियाे ।
अखिल (क्रान्तिकारी) सल्यानकाे १३ औँ जिल्ला सम्मेलनमा नै विवाह भएकाे हुनाले सम्मेलनका प्रतिनिधि, आयाेजक, अतिथि, श्रीनगर अासपासका जनसमुदाय र हाम्राे पारिवारिक आफन्तहरु उपस्थित थिए । अतिथिकाे सन्दर्भले पार्टीकाे केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर बस्नेत र संगठनकाे उपाध्यक्ष रमेश मल्ल उपस्थित हुनुहुन्थ्याे ।
जनवादी विवाहहरू आ-आफ्नै सापेक्षताहरुमा सम्पन्न हुने गरेका थिए । हाम्राे सन्दर्भमा पनि आफ्नै सापेक्षतामा मार्क्सवादी प्रेम र जनवादी विवाह सम्पन्न भएकाे थियाे ।
२०६०मा प्रेम प्रस्ताव, ०६१ असाेजमा स्विकृत
म अखिल (क्रान्तिकारी) सल्यानकाे उपाध्यक्ष र माेति जिल्ला समितिकाे सदस्य रहेकाे समयमा २०६० काे अन्त्यतिर मैले प्रेम प्रस्ताव पेश गरेकाे थिए । ०६१ काे असाेजमा उनले पनि प्रस्ताव स्विकृत गरिन ।
त्यतिबेला म जिल्ला अध्यक्षकाे भुमिकामा थिए । हाम्राे प्रेम प्रस्ताव परिपक्व भएपछि संगठनकाे बैठकमा पेस गरियाे र अनुमाेदन भयाे । उक्त बैठकमा जिल्ला समितिका अन्य केही साथीहरुकाे पनि प्रेम प्रस्ताव संगठनकाे तर्फबाट अनुमाेदन गरिएकाे थियाे ।
करीब तीन वर्षसम्म जन,युद्धकाे क्रान्तिकारी रफ्तारसँगै हाम्राे मार्क्सवादी प्रेमले पनि औंफ्नै रफ्तारमा विकास गर्याे ।
जनयु’द्धकाे पेचिलाे समयमा व्यक्तिगत जीवन र प्रेमलाइ धेरै समय दिने कुरा पनि सम्भव थिएन । पाइएकाे केही समयमा पनि म संगठनकाे अध्यक्ष भएकाेले प्रेमलाइ समय दिएर छलफल गर्ने कुरामा समेत केही अप्ठेराे थियाे ।
संगठनकाे केन्द्रीय सदस्य हुन बित्तिकै मेराे संगठनात्मक कार्यक्षेत्र पाल्पा, गुल्मि, अर्घाखाँची र प्युठान तिर रह्याे भने पार्टी कमिटी पाल्पामा रह्याे र बसाइ पनि पाल्पातिर नै थियाे ।
यसै सन्दर्भमा अखिल (क्रान्तिकारी) सल्यानले १३ औं जिल्ला सम्मेलन आयाेजना गरेकाे थियाे । यहि जिल्ला सम्मेलनमा हामीले विवाह गर्ने याेजना बनायाैं ।
बिबाह भएको एक हप्तामै आआफ्नो कार्यक्षेत्र तिर
उक्त सम्मेलनबाट माेति बस्नेत जिल्ला समितिकाे सचीव निर्वाचित भइन । सम्मेलन सम्पन्न भइसकेपछि हाम्राे विवाहकाे आयाेजना भयाे ।
हामी दुबैले संयुक्त रुपमा पेस गरेकाे निवेदन पार्टी र संगठनकाे तर्फबाट स्वीकृती प्रदान गरियाे । त्यसपछि विवाह शुरु भयाे । विवाहकाे शुरुमा हामीले सँयुक्त रुपमा दिप प्र,ज्वलन गरेर टीका, माला लगाएपछि हाम्राे विवाह सम्पन्न भएकाे घाेषणा गरियाे ।
आफन्त र नेता- कार्यकर्ताहरुकाे तर्फबाट टिकामाला र उपहार प्रदान गर्नेकाे भिडभाड बढ्याे । लगत्तै शुभकामना मन्तव्यहरु शुरु भए त्यस प्रक्रियाकाे अन्त्यमा हाम्राे प्रतिबद्धता मन्तव्य सँगै विवाह सम्पन्न भयाे ।
त्यसपछि चिया खाजा शुरु भयाे । यस क्षेत्रमा खुल्ला रुपमा गरिएकाे उक्त जनवादी विवाहमा जनसमुदायकाे निकै उपस्थित थियाे । हामीले आ-आफ्नाे परिवार बाहेक अरुलाइ बाेलाएका थिएनाैं । सबै सुचना र निमन्त्रणा गर्ने कार्य संगठनले गरेकाे थियाे । त्यसदिन निर्वाचित जिल्ला समितिकाे बैठकपछि हामी आफन्तहहरु संग भेटघाटतिर लाग्याैं ।
त्यसपछि विवाहकाे लागि संगठनले दिएकाे करिव एक हप्ते विदा सकियाे र म कार्यक्षेत्रतिर लागेँ । उनी पनि आफ्नाे कार्यक्षेत्र सल्यानमा क्रियाशिल रहिन । यसरी स्वभाविक रुपमा अन्य विवाह भन्दा जनवादी विवाह प्रगतिशिल, कम खर्चिलाे, छाेटाे, छरिताे र नयाँ संस्कारकाे थियाे।
उनीलाइ चाेट लाग्दा मलाइ दुख्न थाल्याे
हाम्राे मार्क्सवादी प्रेम नै जनवादी विवाहमा परिणत भएकाे थियाे । हाम्राे क्रान्तिकारी विचार, आस्था, वर्गिय पक्षधरता र हाम्राे युवा अवस्था नै प्रेम सम्बन्धकाे पृष्ठभुमि र प्रेरक शक्ति बन्न गए ।
उनीलाइ मैले जिवनसाथीकाे रुपमा छनाैट गरेर प्रस्ताव पेश गर्नु र उनीले पनि स्वीकृति गरेपछि हामी भावनात्मक रुपमा पनि निकट रह्याैं ।
त्यसपछि हामीले व्यक्तिगत भविष्यलाई पनि संयुक्त रुपमा साेच्न थाल्याैं । उनीलाइ चाेट लाग्दा मलाइ दुख्न थाल्याे, म हाँस्दा उनी पनि हाँस्न थालिन । सायद दुइमुटु एक हुने भनेकाे यहि हाेला ।
विवाहले मेराे जीवनमा राजनितिक र सामाजिक रुपमा परिपक्वता र जिवनप्रति जिम्मेवारीबाेध तुल्यायाे । यदि हामीले वास्तविक रुपमा प्रेम र विवाहलाइ बुझेर साँचाे प्रेम र विवाहले गरेका छाैं भने विवाहले व्यक्तिगत विकास र प्रगतिलाइ राेक्ने हाेइन विकास र प्रगतिमा टेवा पुर्याउँछ ।
मेराे सन्दर्भमा हाम्राे प्रेम र विवाहले हाम्राे राजनितिक र सामाजिक जिवनलाइ एकदमै सहयाेग गरिरहेकाे छ ।
विवाहपछि सामाजिक परिपक्वता बढ्छ
अविवाहित जीवनभन्दा विवाहपछि मान्छेमा सामाजिक परिपक्वता र जिम्मेवारीबाेध बढ्छ । र, मानिसले वास्तविक रुपमा जीवन र मृत्यु, सामाजिक मूल्य मान्यता र मानविय भावना र मनाेविज्ञान तथा व्यक्तिगत जीवनका कैयाैं आयामहरुमा परिपक्वता हासिल गर्दछ ।
विवाह कहिले गर्ने भन्ने कुरा अा-अाफ्नै जिवनकाे सापेक्षतामा हुनुपर्छ । तर, कानुनी प्रावधान र सामाजिक मुल्य-मान्यता सँग प्रतिकुल नहुनेगरि पुगेकाे उमेरमा विवाह गर्नु अावश्यक छ ।
पारिवारिक र सामाजिक मुल्यमान्यता प्रतिकुल नहुने गरि सकेसम्म सुलभ र प्रगतिशिल विवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मेराे सुझावमा उमेरकाे २०-३० दशकभित्र विवाह गरिसक्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सामान्यतया ढिलाे विवाह त्यति राम्राे हाेइन
कानुनी उमेर नपुगि विवाह गर्नु हुँदैन । उमेर पुगेपछि धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । उमेर पुगेपछि छिटाे विवाह गर्दा पारिवारिकि, सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक याेजना निर्माण तथा कार्यन्वयनमा सहजता पैदा हुन्छ ।
सबै याेजनाहरु समयमै गर्न सकिन्छ । बिबाहको वेफाइदा त नभनाैं तर विहे गरेपछि व्यक्तिगत चाहानालाई पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धले क्रमश हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढ्छ ।
सामान्यतया ढिलाे विवाह त्यति राम्राे हाेइन । तर, अाफ्नाे निर्धारित लक्ष्य अनुरुपकाे अध्ययन, अनुसन्धान र याेजनाकाे सफतापछि विवाह गर्ने कुरालाइ पनि ढिला भन्नू हुँदैन ।
आजकाे सन्दर्भमा प्रेम, विवाह र पारिवारिक जीवनका पनि विभिन्न स्वरुप र कानुनी प्रावधानहरु आएका छन् । त्यसलाइ सबै आत्मसाथ गर्नैपर्दछ ।
अन्तमा, मेरो विचारमा विवाह उर्जा नै हाे । याे विचार मात्रै नभएर अनुभवमा समेत प्रमाणित भइसकेकाे छ ।
#तिलकराज #जनबादी बिबाह #प्रेमकथा
जब, धौलागिरीको अगाडि बिबाह मण्डप तयार भयो र पम्फा भुसाल सँगै विप्लव उपस्थित भए
तिलकराज भण्डारीको ‘जनयुद्धका हस्ताक्षर’ नामक पुस्तक प्रचण्ड द्वारा बिमोचन
३३ किलो सुन काण्डमा फरार एक प्रतिवादी पक्राउ
पोर्न भिडियो निर्माण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राज कुन्द्रा महिनामा कति कमाउछन ?
नेकपा एमालेको नगरस्तरिय बैठक स्थलमा तोडफोड